Ọ dịghị onye na-enwe mmasị ata ahụhụ site na adịkwa mkpa si Mac kọmputa ma ọ bụ nchekwa ngwaọrụ dị ka mpụga ike mbanye, na igwefoto dijitalụ, kaadị ebe nchekwa, USB mbanye, wdg Ọ bụrụ na ị kechioma, ị ga-enwe ike naghachi Mac data si Time Machine ndabere . Ma, ị ga mkpa enyemaka si pụrụ ịdabere na Mac data mgbake software.
Ebe ọ bụ na e nwere-apụghị ịgụta ọnụ Mac data mgbake omume na internet, ọ bụghị ihe dị mfe ọrụ maka Mac ọrụ iji họrọ kacha adabara otu. Aga m ịme 5 kasị ike nakwa dị ka mfe na-eji ngwa n'ihi na ị na ịhọrọ site na.
Rịba ama: Ị nwere ike na o siri ike ịchọta a kpam kpam free Mac data mgbake omume, na ihe nile 5 Mac data mgbake ngwaọrụ ke ndepụta mkpa ga-akwụ ụgwọ.
Top 5: Remo Naghachi (Mac)
Top 4: Data Nnapụta 3
Top 3: AppleXsoft File Iweghachite maka Mac
Top 5: Remo Naghachi (Mac) ($ 59 dịkarịa ala)
Kere dozie data ọnwụ okwu maka Macintosh ọrụ, Remo Naghachi (Mac) bụ ihe ngwa na-enye ihe niile na ọtụtụ n'ụlọ ọrụ na-achọ: mfe na-eji interface, multiple faịlụ na ụdị nakwa dị ka media ngwaọrụ akwado. Ọ dịghị tupu ihe ọmụma na-mkpa, n'ihi na ọkachamara interface nke Remo Naghachi (Mac) ga-elekọta ihe niile n'ihi na gị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe Pro Edition, nke na-enye gị kasị ọrụ site na-agbake videos ka furu efu / ehichapụ nkebi mgbake, ị ga-akwụ $ 179.
1 n'Ezie mfe na-eji interface, nke dị mma maka nkịtị ọrụ;
2 Ị nwere ike ịmata na-agbake dị iche iche ụdị faịlụ na ha pụrụ iche signatures;
2 Ọ bụ ezie na Basic Edition nwere ole na ole ọrụ, $ 59 bụ ka ga-anabata.
1 Ị nwere ike ghara inwe ọtụtụ ọrụ na Basic Edition, na $ 179 bụ oke ọnụ;
2 Ị ga-enwe ike iji naghachi media faịlụ dị ka photos, audios na vidiyo na Basic Edition. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi media na Remo-agbake, ị chọrọ ịkwụ ụgwọ $ 10 karịa Basic Edition;
3 Ị ga-enwe ike naghachi data si a emerụ mbanye na Remo Naghachi (Mac).
Get Remo Naghachi (Mac)
Top 4: Data Nnapụta 3 ($ 99)
Data Nnapụta 3 awade ọrụ ndị kasị mma, ohere nke na-agbake ehichapụ ọ bụ furu efu na mebiri emebi ma ọ bụ nkịtị ike draịva nakwa dị ka ndị ọzọ media. Ọ na-enyocha gị Macintosh ụgbọala juputara na arụrụala ike usoro nke-enyocha kwa ọ bụla oru gị mbanye.
1 Ike scanning ana achi achi gị oké ekwe omume na-azụ furu efu data;
2 3 scanning nhọrọ dị: Ndenye Doppler, ehichapụ faịlụ Doppler, miri Doppler;
3 E jiri ya tụnyere ndị ọzọ na Mac data mgbake software ke ahịa, Data Nnapụta 3-enye gị ohere oyiri a mebiri emebi mbanye mere na ọ pụrụ iṅomi mmepụta oyiri mbanye kama, mgbe ahụ ị ga-enwe ike naghachi data si mmepụta oyiri mbanye.
1 Mgbe ụfọdụ, ị ga-enwe ike ihuchalu hụrụ data. Ị ga-mgbagwoju anya karịsịa mgbe recoverable faịlụ-apụghị previewed;
2 The interface bụ obere bit mgbagwoju anya.
Get Data Nnapụta 3
Top 3: AppleXsoft File Iweghachite maka Mac ($ 99.95)
AppleXsoft File Iweghachite maka Mac bụ ihe dị mfe ma dị irè Mac data mgbake usoro.
AppleXsoft File Iweghachite maka Mac awade dịghị-pụrụ iche-Mac-nkà-mkpa interface ka Mac ọrụ naghachi furu efu data si ehichapụ, furu efu, emerụ, formatted Mac partitions. Ọ naghachi unmounted olu, na mberede ehichapụ faịlụ na nchekwa, initialized mbanye, ezi uche faịlụ usoro mebiri emebi mbanye, nakwa dị ka ikwu ụzọ furu efu raids.
1 Ọ na-enye gị keukwu Mac data mgbake ngwọta na ya mfe ime;
2 Ya simplistic faịlụ nchọgharị usoro na search nzacha inyere gị aka ịchọta furu efu faịlụ mfe;
3 Hardware wakporo na Software wakporo mgbake dị;
4 Multiple faịlụ usoro akwado: abụba, exFAT, NTFS, HFS +, ISO 9660, EXt2 / 3;
5 Extra ọrụ na-kwukwara na ihe omume: ehichapụkwa data, disk nchọpụta nsogbu na disk ngwaọrụ.
1 Ị pụrụ nanị preview photos na AppleXsoft File Iweghachite;
2 The scanning ọsọ bụ obere bit ngwa ngwa;
3 Ị ga-enwe ike ịgbakwunye omenala faịlụ na ụdị faịlụ search iyo.
Get AppleXsoft File Iweghachite maka Mac
Wondershare Data Recovery for Mac Enyere Mac ọrụ naghachi furu efu Mac & iPhone data.
Ọ bụ a ngwa ngwa, nchebe na a pụrụ ịdabere Mac data nnapụta maka Mac ọrụ. Ọ weghachite furu efu video, photos, ozi ịntanetị akwụkwọ, na Archive faịlụ site ọ bụla Mac-dabeere ike mbanye ma ọ bụ mpụga ike mbanye, USB mbanye, SD kaadị, igwefoto dijitalụ, na ekwentị mkpanaaka. Mgbe ọ bụla gị Mac faịlụ na-efu ruru mberede Ihichapụ, formatting, virus ọrịa, na-ezighị ezi na ime ihe, na-atụghị anya ike ọdịda, na ndị ọzọ na-amaghị ihe, Wondershare Data Recovery for Mac nwere ike ịbụ gị kasị mma enyi.
1 Ọ dịghị pụrụ iche nkà mkpa interface na-eme ka Wondershare Data Recovery for Mac a lifesaver nile di iche iche nke Mac ọrụ;
2 3 Iweghachite ụdịdị dị maka nile di iche iche nke data ọnwụ ndapụta: furu efu faịlụ mgbake, raw faịlụ naghachi na nkebi mgbake
3 Wondershare Data Recovery for Mac na-enyekwara iPhone ọrụ naghachi furu efu photos, SMS, na kọntaktị na ọtụtụ ụdị faịlụ ndị ọzọ si iTunes ndabere faịlụ na Mac;
4 Special preview ikike-enye gị ohere ịhụchalụ photos, akwụkwọ, ozi ịntanetị, txt faịlụ, nakwa dị ka ige ntị ụfọdụ ọdịyo faịlụ ma na-ekiri ụfọdụ vidio;
5 Ọ naputa bụghị naanị m faịlụ ma dum nkebi na mbụ ndekọ Ọdịdị na faịlụ aha;
6 Ị nwere ike ịkwụsị scanning usoro mgbe ọ bụla gị faịlụ na-ahụrụ, nakwa dị ka ịzọpụta scanning N'ihi maka oge ọzọ.
1 Ị nwere ike ghara wụnye ihe omume na mbụ olu nke gị furu efu data iji zere data overwritten;
2 Na ụfọdụ, ndị scanning nke a ngwa nnọọ ike nke na ọ na ọbụna founds ọ bụla cached web faịlụ si nchọgharị gị na-emi odude na ọbụna rụrụ arụ na mebiri emebi faịlụ.
Alsoft DiskWarrior bụ a pụrụ iche Mac data mgbake omume na naputa na-anọchi mbụ ndekọ iji ike patent-rue mgbe technology. Gịnị na-eme ya otú pụrụ iche bụ na ị pụrụ ọbụna wụnye ya na mpụga bootable Mac-dabeere mbanye naghachi furu efu data gị Mac. Nke a bụ n'ezie oké n'ihi na nke a ga-enye gị ihe kasị ekwe omume iji zere data overwritten. Ọ bụ ọbụna ike naghachi data si a okpu Macintosh mbanye.
1 Ọrụ na-ekwe ka wụnye ihe omume na mpụga mbanye;
2 Ị ga-enwe ike naghachi a okpu Macintosh mbanye oke;
3 Ọ nwere ọtụtụ ọrụ-enyi na enyi interface ke ndepụta;
4 Ihe omume na-enye gị ụfọdụ amara atụmatụ ndị ọzọ karịa data mgbake, dị ka akpaghị aka, idozi disk ikikere.
1 Ọ bụ ezie na omume dị mfe na-eji, ọ gbagwojuru anya iji wụnye na melite;
2 The scanning na-ewe obere bit ogologo karịa ndị ọzọ Mac data mgbake software.
All 5 Mac data mgbake software na ndepụta ndị bara uru ma dị ike. Na ọ bụ n'ihi na ị na họrọ otu nke kasị mma ka ojiji nke.
M na uche, ndị kasị mma Mac data mgbake ngwọta bụ ugboro ugboro ndabere gị mkpa faịlụ. Ezie na ị pụrụ ịdabere naghachi utilities, mgbake bụghị 100% na ya n'ezie na-efu gị ego!